မြန်မာပြည်ကိုလွမ်းတယ်: နေ.ရက်တိုင်းကိုပျော်ရွှင်တက်ကြွစွာ ဖြတ်သန်းနိုင်စေဖို.
Posted by မြန်မာပြည်ကိုလွမ်းတယ် at 14:41
myatnoe 20 April 2008 at 18:45
ရွှေပြည်သူ 20 April 2008 at 20:38
ဒီPostလေး အရမ်းကြိုက်တာပဲ မေရေ... စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းပြီး တန်ဖိုးရှိတဲ့ အချက်အလက်လေးတွေ အမြဲမျှဝေပေးလို့ အရမ်းကျေးဇူးတင်ပါတယ် သူငယ်ချင်းရေ...း)
စိုးထက် - Soe Htet ! 21 April 2008 at 05:56
ကွန်ပြူတာ စကရင် ကိုအကြာကြီး မကြည့်ပါနဲ့ ...
မေမိုးမခ 21 April 2008 at 19:07
မေမိုးတော့ tv မကြည့်ဘူး။ ဒါပေမဲ့ ကွန်ပျုတာရှေ့ တော့အကြာကြီးထိုင်တယ်။ ဟိဟိ
ကောင်းသောပိုစ်လေပါ။ မေမိုးတော့လိုက်နာနိုင်မယ်မထင်ပါဘူး စားပြီ အိပ်လို့လေ။